Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - MediaLight Bias Lighting
Magetsi anobatidza nekudzima neTV here?
Izvi zvinokanganisa vanhu vazhinji. Mhinduro yacho inoenderana neTV uye haina kana chekuita nemwenje. Kana chiteshi che USB chikadzima, mwenje inorasikirwa nesimba.
Kune maTV mazhinji, izvi zvichaitika. Nekudaro, kana iwe uine yako Sony Bravia TV, iwe unozoda kushandisa workaround senge MediaLight iri kure kutonga (inosanganisirwa neMediaLight Mk2 Flex) nekuti iyo Bravia's USB ports kuzvibata zvisirizvo. Kana iwe uine Samsung TV ine yakaparadzana One Connect bhokisi, iyo USB chiteshi haidzime kana, uye maTV matsva anobuda nguva nenguva anoita zvisingafungidzirwe. Mamwe maTV akaita seSamsung uye LG dzimwe nguva anotora maminetsi mashoma kuti mwenje udzime mushure mekunge TV yadzimwa. Izvi zvinokonzerwa nezvikonzero zvinoverengeka, zvinosanganisira maitiro ayo anoshandiswa kuwedzera hupenyu hwepaneru.
Nekudaro, kana TV yako ikadzima simba kune yako USB kana iyo TV yadzimwa, yako MediaLight chido dzima kana yapera simba.
Uye, HONGU! Yese yega inopera iyo yatinotengesa ine kuramba kurangarira. Izvi zvinoreva kuti kana simba radzoserwa kumwenje, mwenje unodzosa iyo yekutanga-yakatarwa kupenya mwero.
Iwe unogona kudzidzisa iyo yekuraira yekuraira kune yako yepasirese kure kana smart hub ine IR blaster kuita michina maitiro kana kutenga imwe yedu yakanakisa wifi dimmers kuitira kuti iwe ugone kuudza Alexa kana Google Imba kuvhenekera mwenje (unogona kushandisa HomeKit asi izvi inoda kushandiswa kweImbaBridge).
Iko MediaLight bias light inoshandura mavara?
Kwete. Tariro yedu chete kugadzira kwakarurama, chirevo-chemhando vhidhiyo chena kusarura Chiedzamwenje yedhesiki, zvigadziri uye mababu.
Isu hatiite chero zvigadzirwa-zvinoshandura zvigadzirwa nekuti chinangwa chedu ndechekusimudzira iwo mavara paTV yako, kwete pamadziro ako. BIzvi hazvireve kuti mwenje yedu haikwanise kushandura nzvimbo yako. Yedu ine simba simulated D65 chena bias mwenje mwenje inokufadza iwe sezvo ichipa yakakwana nzvimbo yekutarisa yeTV yako.
Kurudziro yedu? Simbisa mamiriro ekuona. Usawedzere zvinokanganisa zvinokonzeresa mukuzadza, tint uye tembiricha tembiricha.
Kana iwe ukapedza nguva nemari uchigadzirisa chako kuratidza, iwe unoziva kuti mabhanhire mwenje anochinja mavara kana kushandisa isiri chena poindi icha "uncalibrate"kuratidzwa kwako kubva mumaonero eanoona."
Mwenje yedu haizoiti kuti madziro ako achinje mavara, asi zvakare haazokanganisa mavara ari pachiratidziro sezvinoita mwenje inochinja-mavara.
Kana iwe uchida kukwidziridza kuratidzwa kwako nemagetsi akasarudzika anovandudza hunhu hunoonekwa hwemavara uye musiyano pachiratidziri chako, uchideredza kuneta kwemaziso uye kudzivirira kuchengetedza kwemifananidzo, wauya kurudyi nzvimbo. MediaLight inozivikanwa nekururama, kuvimbika uye mutengo wakaringana nevaposta- vekugadzira zvigadzirwa nevatengi zvakafanana.
Nhau dzakanaka ndedzekuti yedu yepamusoro yekuvaka mhando inoguma muhupenyu hwakareba. Iko kune maODs emagetsi ane tarisiro yehupenyu ingangoita gore rimwe chete, yega yega MediaLight strip inobvumidzwa kwemakore mashanu, ichienzanisira yekare cliché, "tenga imwe, chema kamwe."
Unotengesa mwenje yako kuAmazon?
Nepo vamwe vatengesi vepasi rese vangangotengesa kune epasi rese mawebhusaiti eAmazon, isu hatitenge MediaLight kana LX1 paAmazon.com. Isu tinosarudza kutengesa zvakananga kune vatengi vedu uye kuve nekutonga pane yedu yekuverenga uye zvinyorwa. Ehe, iwe unogona achiri kubhadhara neAmazon Pay pane webhusaiti yedu kana uchida, asi isu hatitengese zvigadzirwa zvedu paAmazon.
Zvinotora nguva yakareba sei kuti odha yangu isvike?
Super-nekukurumidza! 99% yenguva, USA mirairo inosvika mumazuva 1-2!
Sezvo isu tese tichiziva, iyo USPS inyonganiso inopisa izvozvi. Isu takafunga kuti hatikwanise kupa iro sevhisi yebasa yatinofanira kupa kana tichifanira kuvimba nenguva dzinotyisa dzekutumira nguva.
Iye zvino, isu tinotakura maodha ese naFedEx 2-Day muUSA uye FedEx Kukoshesa Nyika dzenyika dzese.
Isu tiri muNew Jersey uye tinotumira maodha edu kubva kuNew Jersey. Mirairo yakaiswa pamberi pa3pm inotumirwa zuva rimwe chetero.
Mirairo kune mazhinji eEuropean Economic Community, Canada neMexico, South Korea, Singapore, Taiwan, Hong Kong zvakare inowanzo svika mumazuva 2-3. Isu tinotakura kuenda kupasi rose mukati memazuva matanhatu.
Isu tinogara tichitumira maodha epasi rese neVAT uye nemitero mitero inosanganisirwa mumutengo wekutumira. Iwe hauzove nechikwereti chero chimwe chinhu pakuendesa! Tichava nechokwadi chekudzorera zvaunotenga kana zvikanonoka kusvika, chero bedzi isu tichikodzera kuwana FedEx vimbiso yekudzoserwa. Kana ikarasika, isu tinotumira kutsiva ipapo ipapo!
Ndichanyatsoona musiyano uchienzaniswa nemhando yepasi inopa mwenje?
Ehe. Hatidi kuenda nedambudziko rekuvaita kana vasina kuvandudza mhando yemufananidzo. Tarisa matoni eganda pasi pechiedza chemhando yepasi uyezve pasi peCRI 98 MediaLight bias mwenje kana girobhu. Zviedza zvemwenje izvo zvinoshaya zvakakosha mutsvuku hazvitaridzike zvakanaka kana zvichiratidzwa zvichibva kumatoni eganda. Chikamu chakakosha kwazvo chekuratidzira calibration ndeyekuona kuti matoni eganda anotaridzika echisikigo.
Neratidziro yekutumira (kureva kuti TV), mwenje hauratidzwe kubva pachiratidziro, asi zvivakwa zvechiedza chakatenderedza munzvimbo yekuona ichine Ivan Kuchin mhedzisiro pane izvo zvatinoona pachiratidziro.
Izvo zvakafanana nekuti nei mwenje inodziya ichiita kuti TV itaridze zvakare bhuruu, kana mwenje ine yakawandisa magenta inoita kuti mufananidzo utaridze segirini. Asi panzvimbo pekuve basa remakiromendi echromaticity, kutaridzika kwesimba kunokonzerwa nekupararira kwesimba kwenzvimbo yechiedza.
Kana isu tichijairana nemwenje ine zvisirizvo, iyo ratidziro inotaridzika kunge isiriyo, asi kune yakatarisana nedivi.
Kuvhiringidza? Funga nezve maPhones uye nhare dzeApple izvozvi zvave nemagadzirirwo anoenderana nechena poindi mukamuri. Kana iwe ukavhura TrueTone kana "adaptive kuratidza" kuvhura kana kudzima, iyo chena poindi yechiratidziro inochinja zvakanyanya, ichikuratidza kuti mwenje wepakati wakachinja sei maonero ako echiratidziri. Kana iwe usingashandisi iwo marongero, iwo kuratidzwa kunogona kutaridzika zvakanyanya kudziya kana kutonhorera, zvichienderana nemwenje.
Nekuti pane asipo mavara muurombo hwemavara ekupa mwenje (yakajairwa seyepasi CRI), kushomeka kwekuratidzira kunogona kukanganisa maitiro atinoona iwo iwo iwo mavara pane anoratidzwa. Mazhinji emakoni-ekuona-koni mune edu retinas akatsaurirwa kuona tsvuku kupfuura mamwe ma primaries, uye maratidziro ane matsvuku, girini uye bhuruu subpixels.
Pamusoro pezvo, mwenje masosi asina tsvuku anoigadzirira nekushandisa yero mwenje kuti vabudirire yavo chena poindi (yero + bhuruu = yakaderera CRI chena). Isu tinonyanya kutarisisa kune yeyero / greenish mwenje, iyo pamwe inotsanangura kuti nei iwo mwenje ane mashoma muratidziro inopa kazhinji inoratidzika seyero uye yakasvibira pane kutaridzika sezuva rezuva.
Handisi kuona mwenje mutsvuku paremote control, wakanditumira bhatiri rakafa here.
Kwete, haugone kuona infrared LED pane iri kure control nekuti iri Infrared. Remote control haina kuvheneka zvinoonekwa. MediaLight haishandisi redhiyo frequency kure. Izvo hazviratidzike kuvheneka kana iwe ukadzvanya bhatani.
Chikamu chekukanganiswa chakakonzerwa nenyaya yekuti kwedu kwekutanga remotes vaive RF uye vakaita mwenje zvinooneka. Iwo ekupedzisira maRF remotes akaendeswa kupfuura 3 gore rapfuura.
Kana remote control yako isiri kushanda sezvaitarisirwa, isu tiri 99% tine chokwadi icho imwe yeiyi gadziriso ichagadzirisa dambudziko rako.
Chii chakafukidzwa pasi pemakore mashanu garandi?
"Bhesimendi rakazara ndokutora imba yangu yemitambo nayo."
Vatengi vedu vachatitsigira pane izvi; hatina kumbobvira takaramba garandi. Isu tinoshandisa zvemhando yepamusoro uye mwenje wekusarura wakavakirwa kugara.
Nekudaro, kana chimwe chinhu chikatadza kuenda, tinochitarisa semukana wekukuyeuchidza nezve nei watisarudza. Dai taifanirwa kukwikwidza pamutengo, tichishandisa mhando yepamusoro, ISF-yakasimbiswa zvinhu zvatinoshandisa, tinenge takafa. Nekudaro, isu takaona kuti paive negomba mumusika kana zvasvika pakururama, mhando uye sevhisi.
Tinoda kungotarisa kugadzira mwenje mikuru pane kuyedza kuona kuti chikumbiro chakavharwa here. (Izvi hazvireve kuti isu hatizobvunze kuratidza kuti iwe ndiwe muridzi usati watumira ekutsiva zvikamu).
Cave chete ndeyekuti kana iwe ukaraira kubva kunze kweU.SA, mudunhu ratino mugove wekuparadzira, unogona kubvunzwa kubhadhara chero chinhu nekukurumidza kupfuura standard USPS yekutanga kirasi yepasirese pasuru posvo yezvinotsiva zvikamu.
(MediaLight tafura marambi uye mwenje mababu ane 3 gore / 30,000 awa warandi).
Ndinogona here kubhadhara zvishoma kana ndisingade iyo makore mashanu warandi yeMediaLight Mk5 Flex kana Eclipse?
Vanhu vanobvunza uyu mubvunzo nguva nenguva. Isu hatibhadhare yakawedzera kune iyo waranti. Isu tinopa garandi yemakore mashanu nekuti zvigadzirwa zvedu zvakagadzirwa kuti zvigare kweanenge makore mashanu. Kana isu tisingasanganise iyo warandi, isu tinenge tichiri kubhadharisa iyo yakafanana huwandu hwechigadzirwa. Inotarisirwa kugara kwenguva yakareba nekuda kwekugadzirwa kwayo, saka isu tinopa zano kuti haufanire kubhadhara imwe senti kwemakore mashanu.
Mwenje inorangarira mwero wekupenya wekare kana iwo akadzimwa?
Ehe, vanodaro. Yese kure iri kure yatinopa inoita izvozvo zvakasiyana nezvakaderera zvigadzirwa.
Nei MediaLight ichidhura kupfuura mamwe mwenje wakachipa paAmazon neAlibaba?
Kana iwe uchitsvaga kwakasarudzika mwenje usingabatanidzi kufungidzira, saka usatarise kumberi. MediaLight yakagadzirirwa kupa mushandisi yakajeka uye chaiyo yakajeka ambient mwenje nguva dzese pasina kukundikana - akavimbiswa! Haisi chete mitengo yedu inodhura asi garandi yedu ichave ichifukidza MediaLIght yako refu mushure mekunge iwo mwenje unodhura wapera mumarara. Iwe haufanire kutenga zvinotsiva zvikamu kana imwe bias mwenje zvakare (kweanosvika makore mashanu).
Isu tinoshandisa tsika RuvaraGrade SMD machipisi ekururamisa mune chromaticity uye kupa kweru. Iwo mamwe mwenje haadaro. Izvo hazvireve kuti iwo mwenje yakaipa yekukamba kana kuvhenekesa yako yepasi masitepisi, zvinongoreva kuti iwo haana kukodzera kuverengera kuvhenekera kuseri kwechiratidziro chako.
Iko kushoma kwemavara ekupa indekisi (CRI) yeMediaLight mu2020 iri ≥ 98 Ra uye iyo TLCI iri 99. Mugore redu rekutanga (2015), mwenje yedu yaingopfuura 91 Ra. Yedu MediaLight Pro ine yakasimba kwazvo CRI ye99 Ra uye TLCI ye100.
Zvakarurama sei izvozvo? Vamwe vangati izvozvo zvinoita kuti zvisaoneke kubva kuzuva. Isu hatitaure izvozvo, zvakadaro, nekuti neyakajeka spectrophotometer, tinogona kusiyanisa chero girazi rakagadzirwa nevanhu kubva kuzuva. Izvo, zvakadaro, chaizvo, zvakanaka kwazvo. Zvinoshamisa.
Kunze kwehunhu hwemachipisi edu, isu tinosanganisira zvese zvaungade kune yakasarudzika bias mwenje setup. Isu tinosanganisira dimmer, remote control (paTV mamodheru) pamwe netambo manejimendi clip uye velcro tambo yekugadzirisa yako yekuisa.
Hatichawanzove sarudzo yakachipa, asi edu markups ane mwero kupfuura ayo anotengesa masisitimu akagadzirwa nezvakaderera machipisi, yakachipa pcb uye isina zvachose-inodiwa maficha senge madhimoni Iwe unenge uchishandisa MediaLight yako mushe mune ramangwana, nguva refu mushure mekudzikira kwemwenje emwenje iri mukutakura. Bvunza uchitenderedza. Uchaona. Isu tinofukidza zvese pasi pewarandi yedu nekuti MediaLight yakavakwa setangi.
Ndichanyatsoona musiyano uchienzaniswa nemagetsi asingadhuri?
Iwe unofarira kuona yakatarwa kuratidzwa? Kana zvirizvo, iwe unonyatsoona musiyano kana iwe uchinge wanyatsoita MediaLight bias mwenje. Sezvo zvisingafungidzike sezvazvinogona kuratidzika, kuisa mwenje isina kukodzera kuseri kwechiratidzo chakadzvanywa chaicho "kusaverengera" kuratidzwa nekuti kune chinokanganisa maitiro pane zvatinoona. Kana iwe ukaisa yakaoma bhuruu, yakaderera CRI mwenje kuseri kweTV, yako mufananidzo ichataridza kudziya kumeso ako.
Iwe unofungei nezve mwenje inoshandura mavara neTV?
Iwe unoda here kuita kuti madziro aite seakajeka, kana iwe uri kuyedza kusimudzira pikicha? Vatengi vedu havatarisi pamadziro. Ivo vangatonyanya kuona zvirimo pachiratidziri.
Asi isu hatisi pano kupokana. Tenga zvaunoda kutenga. Chiedza kubuda ropa ndechimwe chinhu icho vanhu vazhinji vanoedza kubvisa, kwete kuwedzera. Muzviitiko zvakaipisisa, zvinoita kuti pikicha itaridzike kunge yakasarudzika uye iwo mavara haawanzoenderana neTV. Zvakatoipisisa, zvinowanzove zvakasarudzika. Kana iwe uri weOCD mhando sesu (yedu # 1 mhando yevatengi, nenzira), inogona kukutyaira iwe mabhanana. Pane zvakawanda zvekutsvaga zvisiri izvo. Zvinokanganisa.
Nekudaro, kana iwe uchizoshandisa rudzi irworwo rwemagetsi pamarangi emavara, isu taigona kupokana kuti iwe unowana yakawanda bang yemubhedha uye wovhara yakaenzana huwandu hwenzvimbo yemadziro nekutenga yakakura kuratidza. Iine 65 "-90" inoratidzira, mufananidzo wacho unonyudza. Philips payakatanga Ambilight muna 2004, maTV aive achikurisa kunze kunosvika makumi mana "-40". Paive paine rusvingo rwakashama - kwete icho chaive chikonzero, asi mwenje yemavara inotaridzika kunge yakapusa pa 50 "TV kunze kwekunge uine gumi nematanhatu.
Magetsi ako anochinja mavara here? Dzinodziya chena here? Akachena chena here?
Kwete. Munhu wese ane maonero ake pamusoro pezvinotaridzika zvakanaka. Tine sainzi nematanho. Mwenje yedu inosimbiswa ne Kufungidzira Science Foundation. Yese MediaLight. Kubva ku $ 32.95 Mk2 Eclipse kusvika kumayuniti edu anodhura ISF yakasimbiswa.
Kana iwe ukatarisa pane mameseji maforamu, iwe unogona kuverenga nezve inotonhorera chena, inodziya chena uye muraraungu ane mavara akasarudzika mwenje kusvika maziso ako apenye pamusoro. Dai mumwe wavo akaita izvo zvavaifanira kuita, isu tingadai tisina kukwanisa kuveza niche ichichaja zvakanyanya kune mwenje yedu (chokwadi: yedu yekugadzira mitengo yakakwira kupfuura yavo chitoro mitengo uye yedu purofiti micheto yakaderera zvakanyanya).
Kana iwe uri nyanzvi colorist, isu takaita The MediaLight iwe. Kana iwe uine hanya nezve imba yemitambo uye uchiziva kukosha kwechakacherechedzwa kuratidzwa, isu takagadzira Iyo MediaLight iwe.
Isu tinogadzira yakanyanya kukwirira CRI (98-99 Ra) CIE Standard Illuminant D65 (6500K; x = 0.3127, y = 0.329) inoenderana ("reference standard" vhidhiyo chena) mwenje wekusarudzira wehunyanzvi nemusika wevatengi uye tinozvitengesa mutengo unonzwisisika uye newarandi yemakore mashanu.
Referensi kusarura mwenje kuri pamusoro pekuita kuti mufananidzo utarike sezvaidiwa nemutungamiriri. Isu tinogona kunge tisina kudzora pane vamwe - kana iwe uchida mwenje ine mavara inopenya pamadziro ako, hatisi kuzoedza kutaura kuti ubve maari. Mushure mezvose, hapana kuverenga kwekuravira.
Nekudaro, kuisa ruvara kuseri kwechiratidziro kunochinja maonero edu pane izvo zviri kuratidzwa. Aya ndiwo mashandiro anoita maziso edu nehuropi. Ruvara runodziya senge orenji kana tsvuku kuseri kwechiratidziro chinoita kuti zvese zviri pachiratidziki zvioneke seblue. Iyo inotonhora tembiricha tembiricha sebhuruu, ichaita kuti zvese zvioneke zvakanyanya kutsvuka. Izvi zvinogona kunge zvisina njodzi kana uchiona The Bachelorette, asi iwe haungade kuzviita mune yako coloring suite kana uchiona Kupanduka.
Iwo maMediaLight Bias Mwenje iri chaiyo D65?
Iyo MediaLight Bias Lighting system inopa chaizvo chaiyo D65 simulation. Paunoverenga mutauro wekushambadza unovimbisa "kukwana" kana "mhedziso" D65, nzwisisa kuti izvi hazvigoneke neazvino tekinoroji yeLED.
Iko hakuna chaiwo D65 mwenje sosi, chete simulators. Iko kunaka kweye simulator kunogona kuongororwa neCIE Metamerism Index. Iyo yakazara yakazara, yakakwira-yakakwira CRI Ruvara rweGrade ™ ma LED mune yedu MediaLight Bias Mwenje inomiririra yakanakisa yezviripo parizvino.
Tiri kungwarira makambani anodaidza zvigadzirwa zvavo "zvakakwana" kana "chaiyo D65" kubhadharisa yakawanda uye vanosarudza kusaita mutsika iyi. Zvigadzirwa edu aiteerera pamwe indasitiri zvinodiwa. Isu tinofara pamusoro pekuti isu tinogadzira sei uye iyo Imaging Science Foundation inobvumirana. Tiri ISF-yakasimbiswa uye mwenje yedu inoedzwa kuti ive yakajeka uye kusagadzikana. Tinosarudza kusapikira uye kupfuudza zvakanyanya.
Nei yangu mita yeLumu ichindipa zviyero zvakabviswa ne300-5000K (mune chero nzira?)
Maererano neLUMU mapeji ekutsigira, yakaderera CCT zviyero pane iyo Lumu chishandiso inogona kudzimwa neinosvika 300K uye yakakwira CCT zviyero zvinogona kubviswa kusvika kusvika 3000K. Mwenje yedu iri pakati peaya maviri akanyanyisa pa6500K uye edu mabinning maficha ari zvikuru yakasimba pane kushivirira kwechigadzirwa cheLumu.
Zvichitaurwa zviri nyore, tine urombo kana iwe uri kugamuchira zvisirizvo mhinduro paLumu yako. Mwenje yedu inoongororwa mukati megadziriro yekugadzira, uye yakazvimiririra yakasimbiswa mubazi reImaging Science Foundation. Isu hatishandure mwenje yedu kuti ivo vayere zvakasiyana pane imwe modhi yemamita uye pane zvinhu zvinogona kukanganisa zviyero zvakatorwa kunze kwenzvimbo yebazi.
Vamwe vakabvunza kuti, "Sei vachiita mita isingagone kuyerwa chaizvo?" Mhinduro yedu ndeyekuti kunyatsoita, mune mimwe minda, kune hukama uye mawvellengths ari kuyerwa anowirawo munzvimbo dzakasiyana dzekupisa kwemavara uye simba rekuparadzira simba, iro rinogona kuyerwa zvakaringana nemamwe madiriza.
Mukutora mifananidzo, mutsauko uripakati pe2300K ne2400K unonyanya kuoneka kune ziso remunhu kupfuura mutsauko uripakati pe6500K na7000K uye kushandiswa kwetungsten-based kana kuenzana mwenje mufirimu kunowanzo kuve mune 3200-5000K renji. Izvi ndizvo, pawebhusaiti yeLumu, uko mhedzisiro pamidziyo yakaita seLumu iri chaiyo.
Mamita anoshandiswa mukugadzira kwedu uye maitiro ekuyedza, zvisinei, anokwanisa kuita chaiwo-zviyero munzvimbo yepamusoro yeCCT kupfuura $ 200 iPhone dongle. Nepo imwe mwenje ingakupa mhedzisiro iri padyo ne6500K pane imwe yemidziyo iyi, chishandiso ichi chiri kuvimba nekufungidzira pamusoro pekupararira kwesimba kwemagetsi mwenje uri pamusoro pechiyero chekugadzirisa uye kugona.
Magetsi mangani anoita mwenje yako yekusarudzika inoburitsa? Ivo vakajeka zvakakwana kune ekuratidzwa kweHDR?
5v 1a mwenje haigone kupfuuridza kupenya kwakanyanya kweanosvika mazana mana emwenje. Izvi zvakapenya kupfuura zvazvinofanira kuve, uye iwe uchazoda kudzima mwenje yako zvakanyanya kuti uwane mareferenzi mazinga. Makuru mashanuv mitsetse inongoparadzira mwenje pamusoro penzvimbo hombe - haisi kupenya, iine mashoma mashoma. Semuenzaniso, 400 inch tambo ichave yakajeka kupfuura 5 inch tambo.
Kana iwe uchida mwenje inopenya, yedu 800 lumen MediaLight girobhu kana yedu 12v uye 24v mitsara yemwenje inopa kupenya kwakanyanya. Nekudaro, edu e12v mitsetse haatenge zvakapotsa pamwe nemwenje yeUSB-inowedzerwa nekuti kupenya kwekuwedzera hakudiwe, uye vanhu vazhinji vanofarira simba kubva kuTV.
Our MediaLight single strip inoburitsa yakanyanya dzidziso yeinenge 400 lumens (42 LED pane angangoita 20lm imwe neimwe). Izvi zvinoenderana nezvinozivikanwa nemwenje ye fluorescent bias mwenje yaizobuda. Isu tinoshandisa chete 5050 (5x5mm) LED's, kwete idiki uye isina kusimba 3528 (3.5x28mm) akasiyana. Izvi hazvisi zvigadzirwa zve LED zvipenga. Ivo vakavakwa nema LED atinowana. Iko kune, zvisinei kupenya kwekushomeka kana uchimhanya kubva pasimba reUSB. Nekudaro, nekuti mwenje wakasarudzika wakawanda unomhanya nedhimoni, haungangosangana nemipimo iyi mukushandisa chaiko.
Our MediaLight Quad zvinobuda anenge 400 lumens pakupenya kwakanyanya. Iko kune, zvisinei, kupenya kwekuganhurirwa kana uchimhanya kubva pasimba reUSB. Nekudaro, nekuti mwenje wakasarudzika wakawanda unomhanya nedhimoni, haungangosangana nemipimo iyi mukushandisa chaiko.
Nezve HDR, hongu ivo vakajeka zvakakwana. HDR vhidhiyo inoshandisa kupenya matunhu kubatsira kuita vhidhiyo kutaridzika kunge chaiko. Iyo MediaLight inodarika izvo zvinobuditswa zvekuratidzira kweHDR kuratidza mwenje.
Iyo MediaLight ine simba rakakwana kune yangu monster 85 "TV?
Ehe. Ichokwadi. Iwe unozofanirwa kuidzima neyakaisirwa kure dimmer. Kana yako TV iri pamadziro, iwe pamwe ungangoda iyo 5m kana 6m Mk2 Flex.
Wangu mumwe wangu haandibvumidze kupenda madziro machena kana kusatsigira mumvuri wegrey, iwe unokurudzira chii?
Izvi zvinoshanda zvakanaka. :)
Mukukomba kwese, kune dzimwe mhinduro, sekuisa kwazvakarerekera kumashure (kunamatira pamadziro kana jira) kuseri kweTV. Asi, iro pendi rependi zvechokwadi rine zvishoma zvainoita paruvara rwechiedza kupfuura zvinopesana
Zvipenga zvinogona kutemwa here?
Ehe, iwe unogona kutema pakati pevaya vekubata mhangura chero paMediaLight strip.
Ko iyo MediaLight bias mwenje inoburitsa mwenje webhuruu?
Kwete. Mwenje yedu yekurerekera ndeyechokwadi 6500K uye ≥ 98 CRI yemhando yedu yeMediaLight modhi uye 99 Ra yeyedu MediaLight Pro mutsetse. Dzimwe nguva isu tinofunga kuti LED bias mwenje vagadziri vanongofungidzira pa6500K nekuti zviyero panguva yemiyedzo yedu zvaive kwese uye zvakashata zvakanyanya. Isu tinoongorora zvese zvemukati medu ne-state-of-the-art zvishandiso uyezve tinoona kuti hativasvibise patinounganidza mwenje mitsetse. Aya haasi marangi emumvura akadzika akaiswa zvekare semwenje wekusarura.
Chimwe chikonzero nei tichishandisa tambo nhema pane tambo chena, iyo inogona kushanda zvakanyanya, ndeyekuti mitsetse chena inogona kupindira zvakanyanya nekupisa kwemavara kupfuura mitsetse yePCB nhema, kunyanya sezvavanokwegura. (Tarisa machena machena emagetsi ayo anogara kunze kwehurefu hwenguva).
Nyanzvi dzinobvumirana kuti mwenje unorerekera fanira uve ruvara rwechiedza chezuva pane zuva risinganetsi, kana chimwe chinhu chinonzi iyo CIE D65 inopenya mwenje. Isu takashandisa yakadzvanywa Photo Research SpectraScan PR-650 uye Sekonic C7000 kuyera yedu yechinhu mwenje inoburitsa diode. Vedu vatinoshanda navo vanozovaedza paPR-670 yavo kuti vaone zvatakawana.
Dai mhinduro iri nani yaivapo, tingadai tisina kuuya kuzotengesa neMediaLight. Zvichitaurwa zviri nyore, hapana imwe yemamwe LED-akavakirwa mwenje makiti pamusika anotouya padyo ne6500K, kunyangwe zvavari kutaura patini. Chiedza cheAntec chatakaedza chakapfuura 9500K, iri padenga denga bhuruu. Chimwe chinyorwa chakakurumbira chaityisa pamusoro pe20,000K! Yedu ari 6500K, uye isu tinoreva. Zviise padivi-ne-padivi uye zvionere wega. Zvirinani zvakadaro, vhenekera pane isina kwachena grey kadhi uye tora chiyero neyakagadziriswa probe. Iwe uchafadzwa.
Mwenje yedu haina kungokwana kukwana kuti ishandiswe pamba, anoshandiswa nenyanzvi dzino penda giredhi mavhidhiyo atinonakidzwa pamitambo yedu yemitambo. Muchokwadi, kana iwe uri nyanzvi ine account ne Flanders Sayenzi, isu tinokurudzira zvikuru kutenga Iyo MediaLight kubva kwavari.
Chii chinonzi ruvara rwekupa indekisi (CRI) yema LED ako?
Sezvo zve2021, ese edu maLED ane CRI yeinenge 98 Ra. Yedu inozivikanwa MediaLight Pro ine CRI ye99 Ra - indasitiri kutanga.
Magetsi ako eBias D65 anoenderana here?
Mwenje yedu yekusarura yakanyatsojeka - yakanyatsojeka pane fluorescent bias magetsi ekugadzirisa mhinduro - ine yakakwira CRI uye inoenderana kara tembiricha tembiricha ye6500K.
Zvakadaro, isu hatitende kuti chero mwenje wekusarudzika pamusika, kusanganisira yedu pachedu, inofanira kutengeswa seD65. Iyo CIE D65 mwenje inopenya inotorwa kubva kunezuva muzuva rine hushoma zvishoma. Semaonero edu, chero mwenje wekusarudzika wakagadzirwa "wakafananidzwa D65," uye ine simba rakasiyana rekuparadzira simba pane ezuva.
Saka, hongu. Kusvika padanho rekuti LED inokwanisa kuenzanisa iyo CIE D65 mwenje unovhenekera, Iyo MediaLight mhinduro chaiyo chaizvo. Ehezve, iwe uchabva watoziva fluorescent kana LED mwenje sosi pasi peiyo spectrophotometer. Yakasvinwa zvakanaka (kubvisa yakawandisa infrared) tungsten halogen girobhu ingangove padyo nekupararira kwesimba kugoverwa kweD65, asi chimiro chinhu, kupisa kubuda, kushaya simba simba uye hupenyu hupfupi hunotadzisa mashandiro etungsten mababu.
Ini ndinogona kutenga iyo MediaLight pasina dimmer?
Iwe unopa iyo MediaLight isina dimmer?
Mune izwi, kwete, asi imo nekuti kunaka kusarura mwenje kunoda kugadziriswa (Kunyangwe, iwe unogona kutenga iyo LX1 isina dimmer, nekuti iyo dimmers inopihwa la carte).
Iyo SMPTE Yakakurudzirwa Gwaro Rekuita rinoti kupenya kwechiedza chakasarudzika sekuratidzwa kubva pamusoro pekunze kweTV kunofanira kunge kuri pasi pegumi muzana yeiyo yepamusoro chena nhanho pane chishandiso chekuona. Pasina kupenya, micheka ye LED inopenya zvine mutsindo. Izvi zvinogona kuguma nekupwanyika vatema, yakanyanyisa halo mhedzisiro uye kukanganisa zvimwe zvekubatsira kwekushandisa bias mwenje pakutanga.
Pamusoro pezvo, pane mamiriro ezvinhu apo iwe ungave uine chena madziro kuseri kweTV pane iyo yakakurudzirwa kwazvakarerekera grey. Nekugadzirisa kupenya kwemwenje iwe unogona kuona kuti haapfuure yakanyanya kukurudzirwa kupenya kwechiedza chakatarisana.
Mamwe masisitimu, senge fluorescent bias mwenje masystem haadzimike, asi anoshandiswa musanganiswa nemabhaffles uye / kana kwazvakarerekera mafirita mafirita kuti uwane iwo mwero wakanaka wekuvhenekera.
Iyo waya kune iyo kure inotaridzika yakaipa ipfupi ...
Remote control haina waya. :-) Zvauri kuona iyi waya kune dimmer module. Kureba hakuna basa nekuti remote control inoshanda from 15 feet away. Kune mamwe akawedzera matanhatu tsoka dzetambo inotungamira iyo inosangana nemwenje. Ukangobatanidza iyo dimmer module iwe unenge usiri kuda kuibata zvakare.
Unotengesa zvigadzirwa zvako kuAmazon?
Isu taigara tichitengesa zvigadzirwa zvedu zveMediaLight kuAmazon. Ndokunge, takaita kudzamara denda re COVID-19 rarohwa. Zvino, chero kuraira kwakange kusingafungidzirwe kwakakosha kwakanonoka zvakanyanya. 30-40 zuva kunonoka kwaive kwakajairika.
Zvichakadaro, nemunhu wese akanamatira pamba, kuda kweTV nyowani uye nezvimwe zvakakwira, asi edu maAmazon maodha akasungwa asina magumo pakuona. Isu takaona kuti hatingakwanise kuonerwa kune imwe kambani futi. Isu taizoisa ese edu echirevo mazai mune imwe tsumo tswanda.
Takasarudza kubvisa zvigadzirwa zvedu kubva kuAmazon ndokuzvitengesa zvakananga. Iine hofisi yedu yakavharwa, takatumira kubva kugaraji redu uye takaronga kutorwa zuva nezuva neUSPS, UPS uye DHL.
Mukuita uku, takadzidza kuti vanhu vazhinji vaisadaro kuziva
Patakaburitsa iyo nyowani Mk2 dzakateedzana muna Chikunguru, takafunga kuti tigozvipa chete pane yedu saiti uye kuburikidza nevatengesi vedu vepasi rese vane mvumo. Izvo hazvina kunetsa uye isu tinosvika pakuziva vatengi vedu zvizhinji zvirinani. Tine hurukuro zhinji dzewebhu, kufona uye vhidhiyo mafoni (isu tichatarisa setup yako usati waisa kana iwe uchida ruoko) iyo inotidzidzisa zvakawanda nezvekuti vatengi vari kushandisa sei zvigadzirwa zvedu. Isu tinopa zvirinani kuraira uye sevhisi zvakare.
Zvakadii nezvekambani yako? Ndeapi hunyanzvi iwe hwaunounza kune yakasarudzika mwenje nzvimbo?
BiasLighting.com chikamu che Scenic Labs. Yakavambwa muna2009, isu tiri vaparidzi veMapfumo & Munsil Benchmark. Izvo zvisati zvaitika, vatangi vedu vakashanda muindasitiri imwechete uye vhidhiyo calibration indasitiri kwemamwe makore gumi, vachitsikisa Dhijitari Vhidhiyo Zvakakosha. Nekudaro, iwe unogona kutaura kuti isu tinorarama uye tinofema imba yemitambo mareferenzi zviyero mune zvese zvatinoita. Nekuda kwehunyanzvi hwedu isu tinokwanisa kuwana hunyanzvi hwechisimba hwemamwe masayendisiti makuru ekufungidzira, pamwe nemamwe maturusi chaiwo emhando yepamusoro.
Iyo yakasarudzika mwenje nzvimbo yanga iri yakanaka hope yekurara pamusoro pemakumi mashoma apfuura. Kunze kwenzvimbo dzinoonekera shoma, senge imwe yezvatinodisisa - mwenje yazvino-yamiswa yeLoal Lume (fluorescent) mwenje, zvigadzirwa zvakawanda pamusika zvaive zvakadhurirwa, marara asingadhuri, kana marara akakwidzwa. Isu takafarira iko kurongeka kweiyo fluorescent masisitimu asi taida kusanganisa kurongeka pamwe nekureruka kweMA.
Ese machena ma LED anotyairwa neyakavanzika bhuruu diode (Ndokumbira utarise, pano mu2020, yedu MediaLight Pro inotungamirwa nepedyo-violet diode isina bhuruu spike). Iyo diode inotungamira mafotoni pamusanganiswa wephosphors uye iwo phosphors, zvakare, inopenya chena. Kana musanganiswa weiyo yepamusoro-soro phosphors yakanyatsokodzera, iwe unowana iwo tembiricha tembiricha iyo iwe yaunoda zvichibva nemaonero anoita ziso remunhu ruvara.
Iwe unogona kunyatso tarisa kune anowoneka mavara echiedza nekuaidzidza pasi peye spectroradiometer. Chiratidzo chekutaura chemachena machena mwenje mwenje ndeye yebhuruu spike pamusoro (mwenje yese ine yavo maitiro - tungsten, fluorescent, mwenje wezuva, neon, nezvimwewo. Kunyangwe ichiita kunge ichi chingaguma nechiedza chebhuruu, ichi ndicho chaicho chiratidziro cheimwe yedu chaizvo LED dzakarurama. Iwo mamwe mavara aripo mune chaiyo chaiyo chiyero kukonzeresa kune 6500K tembiricha tembiricha uye CRI ye ≥ 98 Ra. Ehezve, zviyero zvakatorwa mune inodzorwa marabhoritari marongero ndokubviswa kubva kwazvakarerekera grey kadhi sezvazvinodiwa pakuverenga kwakaringana uye kusingagumi.
Spectral Simba Kugovera kweMediaLight Mk2 Series
Iwe unofanirwa kuve nematanho.
Zvizhinji zve zvatinoita hazvina kunyanya kuoma kana kunakidza, isu tangoita zvine mutsindo nezvazvo, uye izvi zvinotibatsira kugadzira zvigadzirwa chaizvo. Kana vangave vatengesi vakatitumira subpar zvinhu, ivo havana kuita iyo yakatemwa. Pashure chaizvoizvo mazana emaLED, takawana vatengesi vanogona kuvaka zvataida. Isu takagadzira maitiro akanakisa ekudzivirira kusvibiswa uye nekuona kuti iwo ma premium maLED atanga tichitenga anoramba ari echokwadi kune avo tembiricha tembiricha kunyangwe mushure mekunge vaiswa uye vakaungana.